‘कोट लगाउने कल्चर’लाई पोखरामा कम्प्लिट गार्डेनले स्थापित गरेको हो : पौडेल – Arthik Awaj
‘कोट लगाउने कल्चर’लाई पोखरामा कम्प्लिट गार्डेनले स्थापित गरेको हो : पौडेल
By आर्थिक आवाज २०७४ चैत्र २४ गते शनिबार १०:४८ मा प्रकाशित
सञ्चालक, कम्प्लिट गार्डेन, न्युरोड, पोखरा
सानै उमेरमा व्यावसायिक क्षेत्रमा जोडिएका युवा व्यक्तित्व हुन पोषराज पौडेल । २०६६ सालमा पोखरामा कम्प्लिट गार्डेन नामबाट सर्टिङ सुटिङ व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएका पौडेलले छोटो समयमा नै व्यावसायिक सफलता हात पारेका छन् । पोखरामा ‘कोट लगाउने कल्चर’को विकासमा विशेष योगदान पु¥याउन सफल पोषराजले व्यवसायलाई समय सापेक्ष रुपमा स्तरीकरण गर्दै गइरहेका छन् । यसैक्रममा कम्प्लिट गार्डेनका सञ्चालक पौडेलसँग पोखराको सर्टिङ सुटिङ व्यवसायको सम्भावना, विशेषता तथा चुनौति लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवााजले गरेको कुराकानीको सारः
सर्टिङ सुटिङ व्यवसायमा कसरी आवद्ध हुनुभयो ?
२०६६ सालबाट म यस व्यवसायमा लागेको हुँ । पोखरामा इम्पोरियम बाहेक कस्ट्युम समेतको शोरुम हाम्रो पहिलो हो भन्ने मलाई लाग्छ । शुरुवातको समयमा यस व्यवसायको सम्भावना राम्रो थियो । टेलरिङ पनि खासै व्यवस्थित थिएनन् भने इम्पोरियम पनि कम मात्र थिए । पोखरा हाइ प्रोफाइलका ग्राहक भएको ठाउँ भएपनि त्यतिबेला व्यवस्थित टेलरिङ र इम्पोरियम कम थिए । समग्र पोखरेलीको आवश्यकतालाई महशुस गरेर मैले यो व्यवसाय शुरु गरेको हुँ । मेरो रुची पनि यसै व्यवसायमा भएकाले कम्प्लिट गार्डेनको स्थापना गर्न सफल भएँ ।
अहिले पोखरामा सर्टिङ सुटिङ व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
सर्टिङ सुटिङ व्यवसायमा अवसर, सम्भावनाका साथै प्रतिश्पर्धा र चुनौती पनि बढेको छ । यसको भविश्य तथा सम्भावना राम्रो नै मान्नुपर्छ । मैले सोचेजस्तो सफलता पाएको छु र व्यवसायबाट सन्तुष्ट छु । भिआइपीदेखि सबैको बिचमा हामी लोकप्रिय बनेका छौं । प्रतिश्पर्धा हुनु राम्रो हो, तर यहाँ अस्वस्थ प्रतिश्पर्धासमेत बढेको छ, जुन सबै व्यवसायीका लागि हानिकारक छ र अस्वस्थ प्रतिश्पर्धाले व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्छ ।
सेवाको लागि ग्राहकले कम्प्लिट गार्डेन नै किन रोज्ने ?
हामी ग्राहकलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउन सफल छौं । हामीसँग उच्च गुणस्तरका तथा विभिन्न ब्राण्डका कपडा उपलब्ध छन् । पोखरामा हामीले अरु भन्दा भिन्दै पहिचान बनाउन सफल भएका छौं । ग्राहकको रोजाई अनुसारको कपडा हाम्रोमा पाइन्छ । जेन्स तथा लेडिज दुबैको लागि उपयुक्त सटिङ तथा सुटिङको कपडा पाइन्छ । हामीले रिजनेबल प्राइसमा कपडा उपलब्ध गराउँछौं । हामीले बिक्रीलाई भन्दा बढी गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौं । दक्ष कालिगढले कपडा सिलाउने भएकाले ग्राहकको रोजाई अनुसार स्तरीय सिलाईमा सेवा दिन्छौं । समयमा नै काम सक्नु पनि हाम्रो अर्को विशेषता हो ।
ग्राहकको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
ग्राहक हामीसँग पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । ग्राहकबाट हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । यो व्यवसाय अन्य व्यवसाय भन्दा फरक छ । एउटा शुट सिलाउने हो भने करिब ३÷४ वर्ष त्यसले पुग्छ । तरपनि हाम्रोमा ग्राहक धेरै नै आउनुहुन्छ । एक पटक आएपछि दोहो¥याएर आउनुहुन्छ । आफ्ना साथीभाइ तथा इष्टमित्रलाई कम्प्लिट गार्डेन जान सिफारिस गर्नुहुन्छ । हामीले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाबाट उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीले व्यवसाय शुरु गर्दा पोखरामा पनि शुट लगाउने चलन खासै थिएन । पछिल्लो चरणमा यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ । प्याकेजमा पनि काम आउने गरेका छन् । बैंक, सहकारीबाट प्याकेजमा काम आउछन् । स्कुल तथा कलेजको काम पनि हामी कहाँ प्रशस्त आउँछ । कतिपय ग्राहकले कपडाको स्तर नहेरी मूल्य मात्र हेर्ने गरेको हामीले पाएका छौं । देख्दा उस्तै देखिएपनि यसको क्वालिटी तथा ब्राण्ड फरक हुन्छ । त्यसै अनुसार मूल्य पनि फरक हुन्छ । ग्राहकले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
कपडाहरु कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?
हामीले कपडा भारतबाट ल्याउछौं । तेस्रो मुलुकबाट पनि कपडा आउने गरेका छन् । थाइल्याण्ड, हङकङ लगायतका स्थानबाट पनि कपडा आउछ । हामीले ब्राण्डेड र प्रशिद्ध कपडाहरु ल्याउने गरेका छौं । नेपालमा उत्पादित कोटहरुको पनि माग अनुसार बिक्री गरिरहेका छौं ।
नेपालमा सर्टिङ सुटिङ व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हामीसँग भारतीय कालिगढ नै हुनुहुन्छ । लगभग १५ जना कालिगढ हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । ग्राहकको रोजाई अनुसारको डिजाइनमा आकर्षक कपडा तयार पार्न कालिगढको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
व्यवसाय शुरुवात गर्दा केही थाहा थिएन । के होला ? कस्तो होला ? भन्ने लाग्थ्यो । यहाँसम्म आउँदा खुसी लागेको छ । मेरो मेहेनतबाट म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु । पोखरा तथा आसपाका क्षेत्र र छिमेकी जिल्लाका ग्राहकहरुको रोजाईमा हामी परेका छौं । शुटका पारखी तथा आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउन चाहने व्यक्तिहरुलाई म एकपटक कम्प्लिट गार्डेनमा आउनुस् भन्न चाहन्छु । हामीले शुट बेच्ने काम मात्र नगरी शुट लाउदाका फाइदा र विशेषताहरुका बारेमा पनि परामर्श प्रदान गर्छौं ।